Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu dha | Aarsaa Kakuu Haaraa Novaj Interligaj Ministerioj
Dhuga-baatuun nama waan argee fi dhaga'e himu dha. Nama waan argee fi waan dhaga'e namaa dhoksuu hundmiti keenya ni komana. Namni waan nama miidhu tokko arge himu dhiise badisa ga'uf itti gafatama qaba. Namni waan gaarii tokko arge nama dhoksu immo gaarii sana hirmachu namaa nama hin barbane dha.
MAREE: Qoricha nama dhukufate tokko fayyisu yoo bekte maal goota? Nama sanaf ni lata immo jala dhoksita? Namni sun qoricha sana dhabuudhan yoo du’e, Yoo naafate fi kkf yoo irra ga'e itti gafatamin sii irra jira lataa?
MEEa ITTI YAADII: Qoriicha isa hibbo kee siif hiike, Isaa dukkana kee ibse, Isaa yello kee sii irra kaase, Isaa jireenya siif ta'e nama akkata kee dura sana keessa jiru jala dhoksa jirata immo itti agarsiisa jirta?
SEENSA: Duka-buutoni Yesus warri ajjefamu Gooftan isaani irra kan ka'e gaddan miidhaman nagaa dhaban turan Goofticha isaa du' ka'e waliin deebi' wal-argan. Gooftchi nagaa isaani deebisef. Akka isaan hubataniif samu isaan baneftu karra irra isaan buse. Fayyun, Wamamun, Nagaa argachun akkasuman utuu hin tane dhimma Goofticha irratti ittin boba'uuf. Mee Luqaas 24:36-52Tti dubbiis.
Macaafa hubachuu fi ittin jirachuun (24:45) Attamin danda'ama? Kun maal sii barsiisa?
Dhamsa kana keessa ga'een kee maal (24:48)?
Dhamsa kana bakkan ga'uuf humna (24:49a) Attamitti barbachiisa? Waa'ee humna kana maal hubatta?
Goofta halla kee geedaru, Gadda kee gammachuutti jijiruu ni danda ti isaatti de-gatti. Humna itti halla haama keessa ittin darbitu akka inni siif keenuuf kadhadhu.
“Kristosichi dhiphachuuf, Guyyaa sadaffaattis du’aa ka’uuf akka jiru…caafameera.” Waaqayyo varbas waan hunduma ni danda', Maaliif dhiphachu Yesus barbachiise?
Wangeela fayyina labsuun dhimma attatamaa fi dhimma dhimma hundumaa garara ta'e dha. Waamichi keenya dhimma kana bakkan ga'uf ta'u isa dagachuun nuu irra hin jiru. Dhimmi kun dhimma dhuunfa keenya hunduman ol ta'u qaba. Dhimmi keenya hundunuu dhimma garuummaa fi tola Waaqayyo labsu kanaf gugufutu irra jira. Gaafa dhimmi biran dhufe dhimma kanan ol ta'u barbadu ija keenya gara Gooftatti ol kanfne, Waan nu jaamsu barbadu sana iraa faana tokko fudhane, Irra faaganne itti yaaduu qabna. Loltuun lolaf ba'e lafaa lolatti immo dhimma biran qabame dhimma waamicha isa dagatu immo utuu inni itti hin yaadiin xiyyan dinna isa argata. Dhimma keenya isa kaan yoo bakka ga'u dandeenye iyyu, Dhimma waamicha keenya isa jaba yoo irranfane nuti namoota gadamuufin irra jiru tana. Dhugumatu “Namni biyya lafaa guutummaatti buufatee, Lubbuu isaa garuu yoo dhabe, Bu’aan isaa maali ree?” (Mar 8:36)
Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu dha — 3 Rimarkoj
REBIRA IFA on Januaro 12, 2017 Ĉe 7:56 am said:
REBIRA IFA on Januaro 12, 2017 Ĉe 7:55 am said:
mesfin neme on Junio 25, 2012 Ĉe 8:58 am said: